အသက်(၂၀) ကျော်မှာ မလိုအပ်ပဲငွေဖြုန်းမိနေတတ်တဲ့ အချက် (၇) ချက် - ONE DAILY MEDIA
အသက် ၂၀ အရွယ်ဟာ ပျော်ရွှင်မှု ၊ စူးစမ်းရှာဖွေမှု နှင့် ကိုယ်ပိုင်လမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုရှာဖွေရန်အကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်ပါတယ်။
ပြဿနာက သင်ဟာ ငွေသုံးစွဲမှု အလွဲအမှားတစ်ချို့ကို လုပ်မိနေနိုင်ပါတယ် ။ အလုပ်အတွက်နေ့လယ်စာစားခြင်း ဖြုန်းတီးရာမကျပါဘူး ။ အကောင်းဆုံးမဟုတ်လျှင်တောင် အနိမ့်ဆုံးစျေး ကိုဝယ်ယူခြင်းမျိုး လုပ်သင့်ပါတယ်။
ကံကောင်းစွာဖြင့် ငွေချွေတာရန်သင်လုပ်နိုင်သော လွယ်ကူသောအရာများရှိပါတယ် ။ ဒါကတော့ မင်းရဲ့အသက် ၂၀ ကျော်မှာဖြစ်တတ်တဲ့ ငွေရေးကြေးရေးအမှား (၇) ခုဖြစ်ပြီး သင့်ရဲ့ငွေကြေးကို ကောင်းမွန်တဲ့ပုံစံဖြင့် ချွေတာဖြစ်အောင် ဒါတွေကို ပစ်ချလိုက်သင့်ပါတယ်။
(၁) သုံးဖြုန်းမှုတစ်ခုအတွက် အလုပ်ချိန်မည်မျှ ပေးဆပ်ထားရကြောင်းတွက်ချက်ပါ
သင်က ပိုက်ဆံအတွက် အလုပ်ကြိုးစားနေပြီး ပရောဂျက်တစ်ခုပြီးအောင် အချိန်ပိုမည်မျှ လုပ်လိုက်မိပြီလဲဆိုတာကို တွေးမိတဲ့အခါ သင်မျက်စိကျ‌ နေသော ဒေါ်လာ ၄၀၀ တန် အင်္ကျီက သင်နဲ့ထိုက်တန်သည်ဟု သင်ခံစားရလာပါလိမ့်မယ်။
သင့်ကိုယ်သင် ဆုချတာနဲ့မထိုက်တန်ဘူးလို့ဆိုလိုတာ မဟုတ်ပါဘူး။ သို့သော်သင်ငွေ မချေမှီ ဒီငွေအတွက် သင်နာရီမည်မျှကြာကြာ အလုပ်လုပ်ခဲ့ရသည်ကို ပြန်စဉ်းစားပါ။
သင် တစ်နာရီ ၂၀ ဒေါ်လာရတယ်လို့ ဆိုကြပါစို့။ ဆိုလိုသည်မှာအင်္ကျီ၀ယ်ရန် နာရီ ၂၀ (သို့မဟုတ်အလုပ်တစ်ပတ်၏ထက်ဝက်) ကုန်ဆုံးခဲ့ရပါတယ် ။ ဒါကထိုက်တန်တုန်းပဲလို့ခံစားရရင်‌ တော့ ဆက်သာလုပ်ပါ ။ ဒါပေမယ့်နာရီ ၂၀ ဟာကြီးမားတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတစ်ခုလို ခံစားရရင် တော့ ပိုက်ဆံမဖြုန်းသေးပဲ စောင့်တာအကောင်းဆုံးပါပဲ။
(၂) သင့်ဘဏ်ATM မဟုတ်သော အခြား ATM များ
သူငယ်ချင်းတစ်ချို့နဲ့စားသောက်ဆိုင် (သို့) ဘားတစ်ခုမှာ ငွေရှင်းတဲ့အခါ လက်ထဲမှာငွေသားမရှိခဲ့ရင် ထောင့်တစ်နေရာမှာ ATM စက်ရှာတွေ့နိုင်ပါတယ် ။
ဒါပေမယ့် ပြသာနာက သင့်ဘဏ်ATM မဟုတ်တာကြောင့် ဝန်ဆောင်မှုခ များရှိပါတယ် ။ ဘဏ်ကအဲဒီ့ထက်ပိုတဲ့အခကြေးငွေ (ဒါမှမဟုတ်) ပိုတောင်းပါလိမ့်မယ်။ ဆိုလိုသည်မှာ သင်ဒေါ်လာ ၆၀ ထုတ်ယူပါက ATM အတွက်ဒေါ်လာ ၂.၅၀ နှင့်ဘဏ်သို့ ၅ ဒေါ်လာအထိပေးချေရနိုင်ပါတယ် ။ မင်းက အတိုးရဲ့ ၁၂.၅ ရာခိုင်နှုန်းကို ချက်ချင်းပေးချေလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။
ကုန်တိုက်များ သို့မဟုတ် ကုန်စုံဆိုင်များတွင်အများအားဖြင့် ဖွင့်ထားလေ့ရှိသော သင့်ဘဏ် ATM များမှာ ငွေထုတ်ယူသင့်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့ဘဏ်က လက်ထဲမှာငွေသားအနည်းငယ်ပဲရှိဖို့လိုအပ်ပေမယ့် အခြား ဘဏ်တွေကတော့ အဲအခကြေးငွေများများယူပါတယ်။
ငွေစာရင်းစစ်ဆေးမှုအများအပြားဟာ အီးမေးလ်ဖြင့် ငွေလွှဲပို့သည့်အခါအခကြေးငွေ ကောက်ခံပြီး သင်၏ debit ကဒ်ကိုတစ်လလျှင်အကြိမ်အရေအတွက် သတ်မှတ်ချက်တစ်ခုအထိ သုံးနိုင်ပါတယ်။
1- သူတို့၏စည်းမျဉ်းများကိုလိုက်နာပါ၊ သင်၏ debit ကတ်ကိုသတ်မှတ်ထားသောအကြိမ်အရေအတွက်ထက်ပိုမသုံးပါနှင့်။
2- စစ်ဆေးခမပါ ၀င်သောအွန်လိုင်းဘဏ်အကောင့်တစ်ခုရယူပါ။
(၄) တစ်ခါသုံးများအကြောင်း မတွေးခြင်း
၁၀ ဒေါ်လာတန်ရှပ်အင်္ကျီ – ၎င်းသည်အရည်အသွေးနိမ့်ပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောကြောင့် ၎င်းဟာလျှော်ဖွပ်ခြင်း ၊ နေလှန်းခြင်း (သို့) လေးကြိမ်ခန့်လျှော်ပြီး နောက် ပေါက်ပြဲ သွားပါလိမ့်မယ်။
၄၀ ဒေါ်လာတန်ရှပ်အင်္ကျီ – ၎င်းကိုအရည်အသွေးမြင့်အ၀တ်များနှင့်ထုတ်လုပ်ထားပြီးချုပ်ရိုးချုပ်သားလည်း ကောင်းမွန်တာကြောင့် အကြိမ် ၅၀ ခန့် လျှော်ဖွတ်နိုင်သည်ထိကြာရှည်ခံပါတယ်။
ဒေါ်လာ ၄၀ ရှပ်အင်္ကျီသည် တစ်ခါ၀ တ်လျှင်(၀.၈)ဒေါ်လာ ကုန်ကျပြီး ၁၀ ကျပ်အင်္ကျီသည်တစ်ကြိမ်လျှင် (၀.၂၅) ဒေါ်လာဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကဲ့သို့ တူညီသောအတွက်အချက်ဟာ ကော့တေး ၊ အဝတ်အထည် ၊ ဖိနပ်များ၊ မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများ၊ ကိရိယာများနှင့်ရေသန့်ဗူးများကဲ့သို့အရာများတွင်လည်း မှန်းဆနိုင်ပါတယ် ။
(၅) Credit ကဒ် အတိုးနှုန်းများ
ခရက်ဒစ်ကဒ်ဟာ အသုံးဝင်သောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပြီး အချို့ကငွေပြန်အမ်းခြင်း သို့မဟုတ် ခရီးသွားအထူးလျှော့စျေးကဲ့သို့ဆုလက်‌ဆောင်အစီအစဉ်များကိုပေးပါတယ် ။ ဒါပေမယ့်မင်းကမင်းရဲ့လစဉ် ဖြည့်သွင်းငွေအပြည့်ကိုပေးဆပ်ရပါတယ်။
ခရက်ဒစ်ကဒ်အတိုးနှုန်းများဟာ မယုံနိုင်လောက်အောင်မြင့်မားနိုင်ပြီး သင် လစဉ်လတိုင်းပေးသွင်းခြင်းမရှိပါက အကြွေးများတက်လာစေပြီး သင့်ငွေရေးကြေးရေးကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ် ။ ဥပမာအားဖြင့် အကြွေးဒေါ်လာ ၃၀၀၀ ကို အနည်းဆုံး ၁၈ ရာခိုင်နှုန်းအတိုးနှုန်းပေးချေရန် ၁၈.၅ နှစ်ကြာပါလိမ့်မယ်။
ခရက်ဒစ်ကဒ်ကုမ္ပဏီများတွင်ငွေအလုံအလောက်ရှိပါတယ် ၊ ထို့ကြောင့်၎င်းတို့အားအဘယ်ကြောင့်ပိုပေးရသနည်း ?? ဤလမ်းကြောင်းဟာ ကောင်းစွာအလုပ်မလုပ်ဘူးဟုထင်လျှင် သင်၏အကြွေးဝယ်ကတ်ကို မသုံးမိအောင်သာ ပိတ်ထားလိုက်ပါ။
နောက်ထပ်သတိပြုရမည့်အရာတစ်ခုမှာနှစ်စဉ်ကြေးဖြစ်သည်။ ပလတ်စတစ်ကဒ်တစ်ခုအတွက် နှစ်စဉ်‌ကြေး ဒေါ်လာ ၂၀ ကနေ ၂၀၀ ဒလောက် ပေးဖို့ရာမလွယ်ကူပါဘူး။
ဈေးဆစ်ရတာ ပျော်စရာမကောင်းပါဘူး ။ လေ့လာမှုတစ်ခုအရအမျိုးသား ၃၇ ရာခိုင်နှုန်းနှင့်အမျိုးသမီး ၂၆ ရာခိုင်နှုန်းသာ ဈေးနှုန်းညှိနှိုင်းလေ့ ရှိသည်ဟုပြသခဲ့ပါတယ်။
1- လုပ်ငန်းသုံးခုနှင့်အထက်ကိုတင်ဒါ‌ ခေါ်ကာ စျေးနှုန်းမေးပါ။ တူညီသောကမ်းလှမ်းမှုများအကြား စျေးနှုန်းမည်သို့ကွာခြားသည်ကို ကြည့်ပါ။
2- တိုက်ရိုက်မေးမြန်းပါ ။ ဥပမာအားဖြင့် ” ငါ့ကို (၁၅) ရာခိုင်နှုန်းလျှော့ပေးနိုင်မလား ? ”
သင်ညှိနှိုင်းနိုင်သောအရာအချို့မှာအကြွေးဝယ်ကဒ်အတိုးနှုန်း၊ ပေါင်နှံနှုန်းများ၊ ကားချေးငွေနှင့်အာမခံအမျိုးအစားများ ဖြစ်ပါတယ်။
(၇) အခွင့်အလမ်းဆုံးရှုံးခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ မစဉ်းစားမိခြင်း
သင့်ရဲ့ ၃ ဒေါ်လာကော်ဖီကတပတ်ကို ၁၅ ဒေါ်လာ၊ တလကို ၆၀ ဒေါ်လာ၊ တနှစ်ကို ၇၂၀ ဒေါ်လာကျလိမ့်မယ်။
ထိုငွေမျိုးသည်အားလပ်ရက် (သို့) laptop အတွက်ပေးချေနိုင်ပါတယ် ။
သင့်အရေးပေါ်အတွက်စုဆောင်းငွေအဖြစ်ထားနိုင်သလို အိမ်တစ်လုံးဝယ်ရန် သို့မဟုတ် အငြိမ်းစားယူပြီးချိန်သုံးရန် ကဲ့သို့ သော ကြီးမားသောပန်းတိုင်သို့ ရောက်ရန် ဒေါ်လာ ၇၂၀ ဟာ နီးစပ်မှု ပမာဏတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် ။
ပို့ဆောင်ခ၊ ကြိုစုထားသောကုန်ခြောက်ပစ္စည်းများနှင့် နေ့လည်စာအတွက်အပြင်ထွက်စားခြင်းတို့ဟာ ယခုအချိန်တွင်အဆင်ပြေသော်လည်း အရာအားလုံးဟာ သင်ပန်းတိုင်စုဆောင်းငွေမှ လျော့နည်းသွားသော ငွေများဖြစ်ပါတယ်။
One Daily Media Copyright © 2021ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ပေါ်နှင့် pageတွင်တင်ထားသော မည်သည့်သတင်းကိုမှ တခြား pageနှင့်website ပေါ်တွင် ကူးယူခွင့်မပြုပါဘူး။ ကျေးဇူးပြု၍ ကူးယူဖော်ပြခြင်း မပြုလုပ်ရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါတယ်